Akụkọ - SWMC 370-DTH subsurface drilling rig is n'ọtụtụ ebe na saịtị ndị a na-ewu
SWMC 370-DTH subsurface drilling rig na-ejikarị na saịtị ndị a na-ewu
SWMC 370 subsurface drilling rig ọma rụchara ntọala ịchụ mmiri maka ọrụ ụlọ na Guangzhou, China.
Ezigbo ụlọ na Guangzhou na-ekpuchi mpaghara nke 62,000 m2, nke 44,000 m2 dị n'elu ala na 18,000 m2 dị n'okpuru ala. Ala iri abụọ na ise dị n’elu ala, gụnyere ala 4 n’okpuru ikpo okwu na okpukpu anọ n’okpuru ala. Mkpokọta elu nke ụlọ ahụ bụ 108.8m, omimi nke olulu ntọala bụ 16.9m, na mpaghara mpaghara ahụ bụ 21.1m. A na-emepụta usoro ihe owuwu dịka ihe siri ike nke mgbidi mgbidi na ntọala e mere dịka ntọala raft.
N’ịtụle ihe mgbochi mmiri nke okpuru ulo, a na-edozi otu mgbochi bolt na mpaghara ndịda nke ọrụ a. Akara nke mgbochi na-ese n'elu mmiri bụ 130mm, oghere dị 780mm, na omimi olulu ahụ bụ 8m.
Nhọrọ nke ịkụ ala igwe nwere mmetụta dị mkpa na ọganihu dị mma nke ntọala ntọala mgbochi mgbochi mmiri. SWMC ahọrọla SWMC 370 igwe na-egwu ala maka ụlọ ọrụ na-ewu ụlọ, nke kwekọrọ n'ụdị abụọ nke SULLAIR American 600RH compressor ikuku, na nrụgide ọrụ nke 1.7 Mpa na mwepụ nke ikuku nke 17m3. Ọ nwere arụmọrụ dị elu, arụmọrụ ike dị ala, usoro ihe eji arụ ọrụ dị mfe, arụmọrụ na njikwa dị mfe, nke nwere ike ịgbanwe njikwa nke mkpọpu ala na ezigbo oge, yana arụmọrụ ya na arụmọrụ ya nwere ike igbo mkpa nke ọrụ ahụ.
SWMC 370 subsurface drilling machine bụ igwe arụmọrụ na-arụ ọrụ dị elu, na-enye arụmọrụ dị elu, ntụkwasị obi dị elu na igwe na-arụ ọrụ ọtụtụ ọrụ maka ịtọ ntọala injinịa. N'ime oru a, ngwa nke SWMC 370 subsurface drilling machine, na-eme ka arụmọrụ nke ọma rụọ ọrụ nke ọma.
N'ihi na nkume bụ ihu ọma olu gbajiri, kama-egweri gbajiri, tinyere elu slag orùrù ọsọ, dị ọcha oghere ala, ọ dịghị ugboro ugboro ndinuak onu, otú SWMC 370 haịdrọlik mkpọpu ala igwe, nwere a elu mkpọpu ala arụmọrụ na ume itinye n'ọrụ ọnụego karịa n'ozuzu rotary mkpọpu ala.
SWMC 370 mkpọpu ala rig nwere ike mezue a mma mkpọpu ala oghere, n'ihi na haịdrọlik mmetụta nke oghere ala, ugboro percussive oké nkume oge dị nnọọ mkpụmkpụ, ike nkume lithology mgbanwe mmetụta na ndinuak mmetụta abụghị nnukwu, adịghị mfe na-etolite a deflection torque na bit , si otú a na-akpụ oghere iwu, mma dị mma, dị ọcha, ma nwee ike igbochi oke nkume siri ike na usoro ihe egwu dị egwu nke nsogbu ahụ. N'ihi ntụgharị ọsọ ọsọ nke mkpọpu ala, ohere nke nkwekọrịta n'etiti ngwugwu egwu na mgbidi oghere bụ. belatara, ya mere na ọ naghị adị mfe mgbidi mgbidi daa na ihe ọghọm ndị ọzọ.
SWMC 370 subsurface drilling igwe toro ndị na-ewu ụlọ na ọrụ a n'ihi uru ya dị ka njikọ dị mfe, nrụpụta dị mma, nrụgide doro anya na oge mkpụmkpụ. Ka ọ dị ugbu a, a na-ejikarị ya rụọ ọrụ owuwu ụlọ.